China DL620 Hopitaly Halogen NA Jiro amin'ny mpamokatra Casters sy mpamatsy | Wanyu
Ny jiro miasa D620 manontolo dia misy amin'ny fomba telo, valindrihana valindrihana, finday ary rindrina.
DL620 dia manondro ny jiro fandefasana taratra finday.
Ity jiro miasa manontolo ity dia misy fitaratra 3800. Izy io dia afaka manome hazavana hatramin'ny 16000, ary CRI avo mihoatra ny 96 sy mihoatra ny 4000K ny mari-pana loko. Fifantohana azo ovaina amin'ny tanana, 12-30cm, izay afaka mamaly ny filan'ny fandidiana hazondamosina miaraka amina tsindrona kely mankany amin'ny fandidiana fandoroana lehibe.
3. Casters mahazaka akanjo
Castors efatra eo amin'ny fototra. Ny roa amin'izy ireo dia afaka mihetsika malalaka, ny roa hafa dia azohidiana amin'ny frein.
4. Reflector kalitao
Ny taratra dia namboarina tamin'ny akora vy tsy ferrous indray mandeha ary manana fitsaboana lalina manohitra ny okididra (tsy mifono) mba hahazoana antoka fa tsy hihontsina sy hianjera mandritra ny fotoana maharitra.
5. takamoa OSRAM
6. Box mifamadika mahery
Safidy famirapiratana ambaratonga folo.
Fahatsiarovana ny famirapiratana
Toetran'ny herinaratra, fitadiavana jiro fanampiny, famantarana ny tsy fahombiazan'ny jiro lehibe
7. Fiovana haingana
Rehefa tsy mandeha ny jiro lehibe, dia hazava ho azy ao anatin'ny 0.3 segondra ny jiro mpanampy, ary tsy hisy fiantraikany amin'ny hamafin'ny hazavana sy ny toerana.
DL620 Halogen NA Fahazavana
> = 62cm
Previous: Jiro fandidiana azo esorina amin'ny halotra DL500 amin'ny halogen
Manaraka: DL700 Halogen Mobile Operating Theatre Light miaraka amin'ny vidin'ny orinasa